Lumyo Chit | The Voice Of Myanmar Muslim
မြန်မာမှုစာပေ မှ ပသီအကြောင်းအရာများ
မြန်မာမှုပြု အစ္စလာမ်စာပေ (မောင်သန်းဝင်း-ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
မြန်မာဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ အစဉ်အဆက် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သော တိုင်းရင်း သားလူမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ အစ္စလာမ်ဟူသည် ‘ငြိမ်းချမ်းခြင်း’၊ ‘အမိန့်နာခံခြင်း’ ဟု အဓိပ္ပာယ် ရ သည်။ အလ္လာဟ်နှင့် အလ္လာဟ့်တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)၏ အဆုံးအမများကို နာခံခြင်း ဖြစ် သည်။ ဤသို့နာခံ ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသောဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ အစ္စလာမ် သည်ပြီး ပြည့်စုံသော ဘာသာသာသနာ အယူဝါဒလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ စာပေဟူသည် ‘အကြောင်းအရာ၊ အတွေ့ အကြုံ၊ အတွေးအခေါ်၊ အဖြစ်အပျက် တို့ကို ရေးသားပုံနှိပ်ထားချက်’ ဖြစ်သည်။ မြန်မာမှုပြု အစ္စလာမ် စာပေ ဆိုသည်မှာ မြန်မာစာပေဖြင့်ရေးသားထားသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ၊ အတွေးအခေါ်တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုဂံခေတ်အစောပိုင်း ကာလကပင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ‘အစ္စလာမ် ဘာသာသည် ခရစ်ယာန်ထက်စောပြီး မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင် သည်။ ပုဂံ ကျောက် စာ အချို့တွင် ”ပန်သိယ်”” ပ သည်” ဟုရေးသားထား သဖြင့် ပုဂံခေတ်ကပင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များရှိလိမ့်မည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။
[ဒေါ်တင့်စိန်၊ကုန်းဘောင်ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုနိဒါန်း၊ တက္ကသိုလ်ပညာ ပဒေသာ စာစောင်၊ ရန်ကုန်၊ တက္ကသိုလ်များပုံနှိပ်တိုက်၊အတွဲ၃၊အပိုင်း၎၊စာ-၇၅၊၁၉၇၃၊ဇူလိုင်။]
ထိုအဆိုကို ခိုင်မာစေသည့် အထောက်အထားတစ်ရပ်ကိုလည်း ဤသို့တွေ့ရှိရပါ သည်။ ‘ပုဂံခေတ်၏ အစောပိုင်းကာလ ပိတ်သုံမင်း(အေဒီ ၆၅၂-၆၆၀)လက်ထက်တွင် အာရပ်လူမျိုး ကုန်သည် တို့သည် သထုံ၊ မုတ္တမအစရှိသော ဆိပ်ကမ်းမြို့များသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ အာရပ်သင်္ဘော များ သည် အနောက်ဘက် မဒဂတ်စကားကျွန်းမှ အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုများနှင့် တရုတ်ပြည်အထိ သွားလာ လျက် မြန်မာ ပြည်သို့လည်း ၀င်ထွက်ခြင်းပြုခဲ့ကြသည်။
[ဦးကြည် (ဘီအေ) ရာဇ၀င်ဂုဏ်ထူး၊ မြန်မာရာဇ၀င်သိအပ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာ၊ စာ-၈၁-၈၃၊ မန္တလေး၊ ပိဋကတ်တော်ပြန့်ပွားရေး၊၁၉၅၀။]
ဤသို့ဖြင့် သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှိများရေးသားပြုစုထားသည့် ခိုင်မာသော အထောက်အထား မှတ်တမ်း များအရ အစ္စလာမ် ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၃၀၀)ကျော်မှ စတင်ရောက် ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။မြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် ဘာသာရေး သွန်သင်ချက်များကို မြန်မာစာပေဖြင့် ဖြန့်ချိတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာစာပေဖြင့် ရေးထား သော အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာပေ ကျမ်းဂန်များ၊ စာအုပ်စာတမ်းများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ရသည်။ ဤတွင် ဘာသာရေး သက်သက် စာပေနှင့်ဘာသာရေးကို အခြေခံထားသောစာပေများ ပါဝင်ပါသည်။ ဘာသာရေးသက်သက်စာပေတွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၊ ဟဒီးစ်(တမန်တော်မြတ်၏ အဆုံးအမ သြ၀ါဒ တော်များ)၊ စီရာသ်(တမန်တော်မြတ်၏ ဘ၀ဖြစ်တော်စဉ်) စသည့်ကျမ်းများပါဝင်သည်။ ဘာ သာ ရေးအခြေခံစာပေတွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအမကိုအခြေခံ၍ ရေးသားထားသော ၀တ္ထု၊ ကဗျာများ ပါဝင်သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် မြန်မာစာပေသမိုင်းတစ်လျှောက် ပေါ်ထွက်ခဲ့သော ကျမ်းဂန် စာပေများ၊ စာစောင်မဂ္ဂဇင်းများကို လက်လှမ်းမီသမျှလေ့လာတင်ပြပါမည်။မြန်မာစာပေနယ်ပယ် ကျယ်ပြန့် ရေး၊ မွတ်စလင်လူငယ်များ စာပေ လေ့လာဖတ်ရှုလိုစိတ် ထက်သန်လာရေး၊ အစ္စလာမ် စာပေ အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် ရည်သန်ရှေးရှု၍ ပြုစုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ စာပေဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ကုရ်အာန် ကျမ်းလာ အာယတ်တော်များတွင် အဦးအစ ပထမကျရောက်ခဲ့သော အာယတ်တော်မှာ’အစ်က်ရာအ်’ ‘ဖတ်’ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ စူရဟ်(အလတ်က်)၉၆း အာယတ် ၁ တွင် -”အသင်သည် မိမိအား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့် ဖတ်လော့” ဟု ဖော်ပြထား၏။ ထို့အပြင်ဖတ်၊ သင်၏အရှင်သည် အလွန်ရက်ရောသော အရှင်ဖြစ်သည်။ (ကုရ်အာန် ၉၆း၃)ထိုအရှင်သည် ကလောင်ဖြင့် သင်ကြား ပေး၏။(ကုရ်အာန်၉၆း၎)
ထိုအရှင်သည် လူသားအား ထိုသူမသိသော အရာမှန်သမျှကို သင်ကြားပေး၏။ (ကုရ်အာန် ၉၆း၅) ဟူ၍လည်း ဆိုထားပါသည်။စူရဟ်(ရဟ်မာန်) ၅၅ အာယတ်တော် ၃ နှင့် ၄ တွင်လည်း-‘ထိုအရှင်မြတ် သည်ပင် လူသားအား ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်စေတော်မူခဲ့၏။ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင် လူသားအား စကားပြော ဆိုမှုကို သင်ပေးတော်မူခဲ့၏’ဟူ၍ မိန့်ချွေ ထားပါသည်။တစ်ဖန်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် စူရတွလ် ကလာမ်(စူရဟ် ၆၈)ကလောင်တံကဏ္ဍဟူ၍ သီးခြားကဏ္ဍတစ်ရပ်ပါဝင်ပါသည်။’နူးန်၊ (ငါအရှင်မြတ် သည်) ကလောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ရေးမှတ်ကြသည်တို့ကိုလည်းကောင်း သက်သေ ထူတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် ၆၈း၁)ဟူ၍ ပါရှိပြန်ရာ ကုရ်အာန်က စာပေ အရေးအသားနှင့် ဖတ်ရှုခြင်းကို အားပေး ထားကြောင်းသိရသည်။
စာပေသည် ဘာသာစကားကို မြင်သာအောင် အက္ခရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။ ဘာသာစကား၊ ရေးသားခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်းတို့သည် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူသားအား စာပေအက္ခရာအရေးအသားများနှင့် အတတ်ပညာမှန်သမျှကို တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ လေ့လာ သင်ယူတတ်မြောက်နိုင်မှုဟူသည့် ဗီဇစွမ်းရည်ထူးများ ထည့်ပေးထားသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က ခေတ်တိုင်း၌ လူသားတိုင်းအတွက် စာဖတ်ရန် ပထမဆုံး၊ အရေးအကြီးဆုံး တာဝန်ကြီးတစ်ရပ်အဖြစ် မလုပ်မနေရ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထား၏။ မည်သည့် ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာ စာပေ ကျမ်း ဂန်တွင်မှ ဤသို့သီးသန့်ညွှန်ကြားချက်မရှိပါ။ ဤသည်ပင် အစ္စလာမ်တရား၏ ထူးခြားပြည့်စုံမှု ဖြစ်သည်။ စာမဖတ်သူသည် မတတ်၊ မတတ်သူသည် မတိုးတက်နိုင်။ ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်း သိအောင်၊ တတ်အောင် တိုးတက်အောင် စာများများဖတ်ရန်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က အမိန့်ပေး ထားသည်။ အမြဲဖတ်မှတ် လေ့လာနေသူအား အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်က အသိဥာဏ်ပညာ ဗဟုသုတ များကို ရက်ရောစွာ ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာ လူတို့၏ အသိဥာဏ်ပညာနှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ရည်ကိုယ် သွေးများမြင့်မားလာပါမည်။
တမန်တော်မြတ်၏ စာပေဆောင်ရွက်ချက်အစ္စလာမ်သာသနာ မထွန်းကားမီ အမိုက်ခေတ်တွင် အာရေဗျ ၌ စာရေးစာဖတ်အစဉ်အလာ လုံးဝမရှိပါ။ အစ္စလာမ်က အရေးအဖတ်ကို အထူးဦးစား ပေးသည်။ တမန်တော်မြတ်လက်ထက်တော်၌ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ထံမှ ကျရောက်လာသောဝဟီများ ရေးမှတ်ရန်၊ စာပေးစာယူ ပြုလုပ်ရန်၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်၊ အမိန့် ညွှန်ကြားလွှာများ ထုတ်ရန် စာရေးစာဖတ် အရေးကြီးကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ တမန်တော်မြတ်၏ဗလီအနီး အဆွဟာဗိဆုဖ်ဖဟ်တွင် အစ္စလာမ့်ဗဟုသုတရှာမှီးသော တပည့်သာဝက များအား အရေးအဖတ် သင်ကြားစေ ခဲ့သည်။ အရေးအဖတ်တတ်သော သာဝကကြီးများအား စာရေးစာချီ ခန့်သည်။
ဟစ်ဂျရီ၂-ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသော ဗဒရ်စစ်ပွဲ၌ ရန်သူသုံ့ပန်း (၇၀)ဖမ်းဆီးရမိသည်။ သုံ့ပန်းများအနက် တစ်ဦးလျှင်လျော်ကြေးငွေလေးထောင် ပေးနိုင်သော သူများအား လွှတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ အနက် အချို့က ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ လျော်ကြေးမပေးနိုင်ကြ။ သို့ရာတွင် အရေးအဖတ်တတ်ပါက အစ္စလာမ့် ရင်သွေးကလေး (၁၀)ယောက်အား အရေးအဖတ် သင်ကြားပေး လျှင်လည်း သုံ့ပန်းအဖြစ်မှ လွတ်လပ် ခွင့် ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် စာမတတ်သူ ပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စာ မတတ်သူပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို အစ္စလာမ်က ပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်သည် မဒီနာမြို့တွင် ယဟူဒီများနှင့် ဆက်ဆံတော်မူခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ဘာသာစကား မှာသွိဗ်ရာနီ (HEBREW)ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်မြတ်က သာဝကကြီး ဣဗ်နု ဆာဗိတ် အား(HEBREW) ဘာသာစကားကိုသင်ယူစေသည်။ ထို့ပြင် ထိုစဉ်ကရေပန်းစားခဲ့သောေ ခတ်မီ ဘာသာ စကားဖြစ်သည့် ရောမ ဘာသာစကားနှင့် ဆီးရီးအက် ဘာသာစကားတို့ကိုလည်း သင်ကြား စေသည်။
‘ပညာကို ပုခက်တွင်းမှ သင်္ချီုင်းထိရှာဖွေကြ’ ‘ပညာသင်ကြားခြင်းသည် မွတ်စလင်အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး တိုင်းအပေါ်တွင် တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။’ဟူသော သြ၀ါဒတော်များအရ ဘာသာစကားနှင့် စာပေ ပညာကို တမန်တော်မြတ်က အလေးထားကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။မြန်မာ အက္ခရာနှင့် စာပေအရေးအသားပညာမြန်မာစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအစုစုမှာ အများအားဖြင့်မြန်မာတို့က စတင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုင်းတစ်ပါး မှယူ၍ မြန်မာမှုပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။မြန်မာ အက္ခရာ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးဗြဟ္မီအက္ခရာမှ ဆင်းသက်လာ သည်။ဗြဟ္မီအက္ခရာမှပွားလာသော အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း သုံး အက္ခရာများအနက် မြန်မာပြည်တွင့်တွေ့ရသော အက္ခရာမှာ တေလုဂူကနဍီ အက္ခရာဖြစ် သည်။ ထိုတေလုဂူကနဍီ အက္ခရာမှ ပျူ၊ မွန်၊ မြန်မာအက္ခရာတို့ဆင်းသက်လာသည်။ကျောက်စာ၊ မင်စာ၊ အုတ်ခွက်စာအထောက်အထား၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနအထောက် အထားများအရ မြန်မာတို့သည် ကရင်၊ ကမ်းယံ၊ ချင်း၊ ပျူ၊ မွန်၊ တောင်သူ၊ လ၀၊ ရှမ်း၊ သက်လူမျိုးများနှင့် ရောထွေး နေထိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာတို့ ရောနှောဆက်ဆံနေသော အခြားလူတို့တွင် စာပေအရေးအသားရှိနေပြီ ဖြစ် သော လူမျိုးတို့ပါဝင်နေသည်။ ထိုသူတို့မှာ တိုင်းရင်းသားတို့တွင် ပျူနှင့်မွန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသား တို့တွင် ကုလားအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ကြ၏။ အမှန်မှာ စာပေအရေးအသားပညာကို ထိုကုလားများထံမှပင် တိုင်းရင်းသားများက သင်ယူခဲ့ကြသည်။
[ ဦးဝန်(မင်းသုဝဏ်) မြန်မာနိုင်ငံရှေးခေတ် ဘာသာပြန် သမိုင်းချုပ်၊ ဘာသာပြန်စာပေစာတမ်း၊ စာ-၂၊ စာပေဗိမာန်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၇၀]
ပုဂံခေတ်တွင် မြန်မာမှုပြု အစ္စလာမ်စာပေဟူ၍ သီးခြားမတွေ့ရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစ္စလာမ် သာသနာသည် ပုဂံခေတ်ကပင် စတင်ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အစ္စလာမ်စာပေများလည်း ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။ ပုဂံခေတ် မြန်မာစာပေတွင်’ကျောက်စာ’များကိုသာ အများဆုံးတွေ့ရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျောက်စာရေး ထိုးသည့်အလေ့အထကို အီဂျစ်လူမျိုးများက စတင်သည်။ အီဂျစ်နှင့်အခြားမြေထဲပင်လယ်ဒေသများတွင် တွေ့ရသည့် ကျောက်စာများမှာ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ပုဂံခေတ်၌ပင် အရဗီဘာသာနှင့် ရေးထိုးထား သော ကျောက်စာ များရှိသည်ဟု သိရှိသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်ကစစ်တွေခရိုင် မြို့ဟောင်းမြို့(မြောက်ဦးမြို့)နန်းရာကုန်း အရှေ့ဘက် သရက်အုပ်ရွာမှရသော အလျား ၃ပေခွဲ၊အနံ ၂ပေ၊ စာကြောင်းရေ၈ကြောင်းပါသည့်ရှးဟောင်းပါရှားနှင့်အူရ်ဒူဘာသာစာ ရောပြွန်းရေးထိုးထားသော ကျောက်စာတစ်ချပ်ကို တွေ့ရသည်။ ရှေးရခိုင်မင်း လက်ထက်က ရွှေချိန် ၂၃တန် ပိဿာ၁၄၂၉၁ ကို မြှုပ်နှံသည့်အခါ ရေးထိုးခဲ့သည့် ကျောက်စာဟု သိရသည်။ (၂၉-၁၁-၆၉ နေ့ထုတ် ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ စာ-၅)ထိုအချက်ကို အထောက်အထားပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရှေးခေတ်ဘုရင်မင်းများ အုပ်စိုးစဉ်က အရဗီ၊ ပါရှား၊ အူရဒူကျောက်စာများ ရှိလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်း နိုင်သည်။
ပုဂံကျောက်စာအချို့တွင် ပသီ၊ ပန်းသေး ဟူသော ဝေါဟာရများကိုတွေ့ရသည်။ သာဓကအားဖြင့် ‘သ္မီ မြက်ရ ပသီ’ သက္ကရာဇ် ၅၈၅ခုထိုး၊ မင်းအနန္တသူ (လေးမျက်နှာဘုရား) ကျောက်စာ ကြောင်းရေ ၃၉-၄၀)’ငီ ငာပန်သိယ် ၁’ သက္ကရာဇ် ၆၀၄ ခုထိုး၊ ညောင်ရမ်းမင်းကြီးသမီး (အိမ်ရာကျောင်းကျောက်စာ) တောင်ဖက်ကျောက်ချပ်၊ စာကြောင်းရေ ၅) တို့ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ရည်ညွှန်း ခေါ်ဆိုသည့် လူမျိုးအခေါ်အဝေါ်များကို ကျောက်စာများတွင် တွေ့ရှိရသည်ကို အထောက်အထားပြ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပုဂံခေတ်ကပင် စတင်ရောက်ရှိနေပြီဟု အခိုင်အမာ ဆိုနိုင် ပါသည်။ ပေ၊ ပုရပိုက်တို့ကို စာရေးကိရိယာအဖြစ် ပုဂံခေတ်ကပင် စတင်အသုံးပြုခဲ့မည်ဟု ယုံကြည် ရသောကြောင့် ပေ၊ ပုရပိုက်တွင်ရေးသား ထားသော စာပေများရှိကောင်း ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ရှာဖွေရန် ခဲယဉ်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုဂံခေတ်တွင် မြန်မာမူပြုအစ္စလာမ်စာပေ မရှိဟု ယတိပြတ်မဆိုသာပါ။
ရှေးအကျဆုံး တွေ့ရှိရသော အစ္စလာမ်စာပေမှာ ညောင်ရမ်းခေတ် (အေဒီ ၁၅၉၇-၁၇၅၁) စနေမင်း လက်ထက် (အေဒီ ၁၆၉၈-၁၇၁၄)တွင် ဖြစ်သည်။ ရုံးစာပေလက်ရေးမူ ကျမ်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ –
၁။ ဆုတောင်းကျမ်း (အရဗီ၊ မြန်မာ၊ အဓိပ္ပာယ်နှင့်တကွ)
၂။ သစ၀ုဖ်ကျမ်း (မြန်မာ)
၃။ ခွပ်သဗဟ်ကျမ်း (အရဗီမြန်မာ အဓိပ္ပာယ်နှင့်တကွ)
၄။ သရာဝီဟ်နမာဇ်ထူးမြတ်ကြောင်း (မြန်မာ)
၅။ မော်လူးဒ်ရှရီးဖ် (မြန်မာ) ဟူသည့် ကျမ်းများဖြစ်သည်။ ပြုစုရေးသားထားသူ၏ အမည်၊ ပါရှိသော အကြောင်းအရာနှင့် ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါကလည်း မည်သည့်ဘာသာစကားမှ ပြန်ဆို သည် စသည်တို့ကို မသိရှိရပါ။
[ဦးခင်ရွှေ၊ အစ္စလာမ်စာပေပြခန်းမှတ်တမ်း၊ အစ္စလာမ်စာစောင် ၁၉၅၇ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ စာ-၅၅]
ကုန်းဘောင်ခေတ် (အေဒီ ၁၇၂၅-၁၈၈၅)တွင် အစ္စလာမ်စာပေ အမြောက်အမြား တွေ့ရှိရသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အား မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုကို စတင်တွေ့ရှိရသည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ယူနက်စကိုအတွင်းရေးမှူးများ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန် ထားသော နိုင်ငံတကာစာပေ၌ အကျော်ကြားအထင်ရှားဆုံး စာအုပ် (၁၀၀)စာရင်းအရ ဘာသာ ရေးကဏ္ဍ၌တစ်အုပ်အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့ဂန္ထ၀င်စာပေ ကျမ်းတစ်ဆူဖြစ်ပါသည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့က အမြဲရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်းပြုကြသည်။ ဤသည်ကို ရည်၍ စာပေလေ့လာသူတို့က ယင်းကျမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေအများဆုံး ဖတ်ရှုသော ကျမ်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြပါသည်။
[မောင်ထင်၊ အာရပ်စာပေသမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့စာပေအညွှန်း (အိန္ဒိယ၊ အီရန်၊ အာရပ်စာပေသမိုင်း) စာ-၉၁၊ ရန်ကုန်၊စာပေဗိမာန်၊၁၉၇၄]
ဤမျှ ကျယ်ပြန့်မှုရှိသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသည့် အထောက် အထားအား ဤသို့တွေ့ရှိရသည်။”ဗဒုံမင်းလက်ထက် ကျမ်းစာစုဆောင်းဖို့ အိန္ဒိယကို လွှတ်တဲ့အခါ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာပေများလည်း စုဆောင်းခဲ့တယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ အကျဉ်း ချုပ်ကျမ်းပါလာ လို့ ဒီကျမ်းကတစ်ဆင့် ကိုရမ်ကျမ်းရဲ့ အနှစ်သာရ အဆီအနှစ်များကို သိရှိရတယ်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ ကိုရမ်ကျမ်းကို မြန်မာဘာသာ မပြန်ဆိုရသေး လို့ အာရေဗျ ဘာသာ နဲ့ဖတ်နိုင်အောင် သင်ပေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြန်ဆိုစေခဲ့တယ်။
”[တတိယနှစ် ၀ိဇ္ဇာသင်တန်း (သမိုင်းသာမန်) သမိုင်းဘာသာပို့ချချက်များ၊ စာ-၃၇၊ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း သင်ရိုး အမှတ်(၃၀၃) အတွဲ(၂)၊ တက္ကသိုလ်စာပေး စာယူသင်တန်း၊ စာစဉ် (၁၁၅) ၁၉၈၇၊ စက်တင်ဘာ]
ထို့ကြောင့် ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးပိုင်းအထိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အရဗီ ဘာသာနှင့်ပင် လေ့လာခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် အမရပူရမြို့တည် နန်းတည်ဘိုးတော် ဘုရားဗဒုံမင်း(သက္ကရာဇ် ၁၁၄၃-၁၁၈၀)လက်ထက်တွင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာပြန်ဆိုမှုကိုစတင် တွေ့ရှိရသည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူ ပညာရှိကြီးမှာ ရွှေတောင်သာဂသူ ဆရာကြီးဦးနုဖြစ်သည်။
ဆရာကြီးဦးနုသည် အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ်ကစ၍ ကျမ်းစာများကို စတင်ပြုစုရေးသားသည်။ ထိုသို့ ကျမ်းများရေးသည့်အခါ အရဗီစာပေအချို့ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုပြုရပါသည်။ ဆရာကြီးဦးနု၏
၆ – ခန်းကျမ်း ပထမအခန်းအစတွင် ”ယခုပြုစုအံ့သည်မှာ (နမာဇ်)တွင် ဘတ်ရွတ် သရဇ္ဈာယ် သည့် (အရ်ဗျီ)ဘာသာကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပါမည်။ စိတ်၌အကြံရှိသည်မှာ နှစ်လများ လှပြီ။ ခုံမင်းမောင်ဥ တောင်းပန်သည်လည်း ရှစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ပြန်ဆိုရာ အဓိပ္ပါယ်ကျန်ြွကင်းမှားယွင်းရှိလျှင် ပညာရှိသောသူတို့ပြင်တော်မူကြပါ။ (အာယတ်) များလည်းပါ သည်ဖြစ်၍ အဓိပ္ပါယ်မကုန်နိုင်ရာ၊ ကျွန်ုပ် ဥာဏ်ဝင်စားနိုင် သရွေ့သာဖြစ်နိုင်ရချေသည်”
[ဦးနု၏ ၆ ခန်းကျမ်း၊ ငါးစောင်တွဲကျမ်း၊ စာ-၂၀၅၊ ရန်ကုန်၊ လောကပါလ ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၃၁]ဟု ရေးသား ထားသည်။ အရဗီဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို ကြောင်းခိုင်လုံသော အထောက်အထား တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးဦးနု၏ သုံးခန်းကျမ်း၊ ခြောက်ခန်းကျမ်း၊ ၃၅ခန်းကျမ်း၊ သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်း တို့တွင် ကုရ်အာန် အာယတ်တော်များကို ကိုးကား၍အရဗီမူရင်း နှင့် တကွ မြန်မာ အသံထွက်၊ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုချက်များ ရေးသားထားသည်ကို နေရာအတော် များများ တွင်တွေ့ရှိရသည်။
စာဆိုတော်ဦးနု (၁၇၆၂-၁၈၂၂)သည် ရမ္မာဝတီမြို့ဝန်ဖြစ်သည်။ဘုရင့်အထောက် တော် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရွှေတောင်သာဂသူဘွဲ့ချီးမြှင့်ခံရသည်။ သာသနာ့ဘွဲ့အမည်မှာ မုဟမ္မဒ်ကာစင်မ် ဖြစ်သည်။ ‘ကာစင်မ်’၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ဝေသူ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဗဒုံမင်း၏တာဝန်ပေးချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားကာစာပေကျမ်းဂန်များ သယ်ပေးခဲ့သည်။ ပေ ပုရပိုက်မူ ၁၀၀ကျော်နှင့် ကျမ်း ပေါင်း( ၁၇၇ကျမ်း ) ဆောင်ယူပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကျမ်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၁ ခန်းကျမ်း(၁၇၉၀)၊ ၃ခန်းကျမ်း (၁၇၉၄)၊ ဘင်္ဂလားသွားမှတ်တမ်းလင်္ကာ ၅၅ ပိုဒ်(၁၈၀၅)၊ ၇ ခန်းကျမ်း (၁၈၀၇)၊ ၆ ခန်းကျမ်း(၁၈၁၂)၊ ပညတ်ခွဲတမ်း ၁၆ ပိုဒ် လင်္ကာကျမ်း (၁၈၁၃)၊ ၃၅ ခန်းကျမ်း(၁၈၁၄)၊ သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်း (၁၈၁၆)တို့မှာ ပုံနှိပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိအ်ရာဂ်ျခန်းကျမ်းစာခေါ် ပျို့ကျမ်းတစ်စောင်ကိုလည်း ရေးခဲ့သည်။ ပိုဒ်ရေပေါင်း (၂၈၈)ပိုဒ်ပါဝင်သည်။ လက်ရေးမူ အဆင့်၌သာရှိသည်။
ထိုကျမ်းများအနက် ၃ ခန်းကျမ်း၊ ၆ ခန်းကျမ်းတို့သည် ယုံကြည်မှုအကြောင်းကို အဓိက ဖော်ကျူးထားသည်။ အရဗီမှ မြန်မာဘာသာသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုသော နိဿယမျိုးဖြစ်သည်။ ၁၁ ခန်းကျမ်းနှင့် ၃၅ခန်းကျမ်းမှာ အစ္စလာမ်၏အခြေခံမဏ္ဍိုင်ကြီး ၅ ရပ်နှင့် ကျင့်ရန်ကြဉ်ရန်တို့ကို ခွဲခြား လမ်း ညွှန်ထားသောကျမ်းဖြစ်သည်။ ပညတ်ခွဲတမ်း ၁၆ ပိုဒ်လင်္ကာကျမ်းမှာ ၀တ်ပြုမှုဆိုင်ရာကို ဖွဲ့ဆိုထားသည်။
ဘင်္ဂလားသွားမှတ်တမ်းလင်္ကာကြီးမှာ ခရီးသွားမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး မြန်မာစာပေလောက၌ စာပေ တစ် စောင် တစ်ဖွဲ့အနေနှင့် အစောဆုံးတွေ့ရသော မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး၊ သမိုင်းရေး၊ ဘာသာ ရေး၊စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အစုစုကို ပေါင်းစပ် ရေးထားသည်။ တရားသံဝေဂနှင့် ဆုံးမ စကားများလည်း ပါဝင်သည်။ ရာဇ၀င် အထောက်အထားဖြစ်နိုင်သည့် အချက်အလက်ပါရှိခြင်း၊ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့စနစ်၏ အန္တရာယ်ကို စာပေမှတစ်ဆင့် အစောဆုံးတင်ပြအသိပေးခြင်း၊ မြန်မာစာပေတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး၊ တရားသဘောကို ထည့်သွင်းတင်ပြခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကို ကဗျာ လင်္ကာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရေးဖွဲ့ထားခြင်းတို့မှာ ဤမှတ်တမ်းကြီး၏ ထူးခြားချက်များဖြစ်၏။
သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်းမှာ သက္ကရာဇ် ၁၁၇၈ ခုနှစ်တွင် ဘိုးတော် ဗဒုံမင်းထံတင်သွင်းသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား (၁၁၄၃-၁၁၈၀)ခုလက်ထက်တွင် သာသနာ ပေါင်းစုံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘုရင်ဧကရာဇ်က စူးစမ်းမေးမြန်းလေ့လာတော်မူရာတွင် အစ္စလာမ်သာသနာ အတွက် ဦးနုက ရေးသား တင် ဆက်သော အစ္စလာမ်သာသနာ လျှောက်စာတမ်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ [သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်း၊ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏ကျမ်းဦး စကား၊ စာ-(ဈ)၊ အစ္စလာမ်စာ ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၆၀]
ဤနေရာတွင် အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာ ကောင်စီဌာနချုပ်၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်၍ မြန်မာ့ သမိုင်းပညာရှိတစ်ဦးလည်းဖြစ်သော ဇေယျကျော်ထင်ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏ အဆိုအမိန့်မှာလည်း မှတ်သား ဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။ သံတော်ဦး တင်လွှာကျမ်း၏ ကျမ်းဦးစကားတွင် ‘အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာစာပေ သမိုင်း’ ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်- ”မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် အစ္စလာမ်သာသနာကို အခြေပြုသည့် စာကောင်း ပေကောင်းများပေါ်ပေါက် ခဲ့သည့် ခေတ်ရှိသည်ဟုဆိုလျှင် သာမန်အားဖြင့် သံသယဖြစ်ကြ ပေလိမ့်မည်။ စကားမြေသာမက ပျို့ ကဗျာ လင်္ကာများပင် ထွန်းကားခဲ့သည် မှန်သော်လည်း ထိုစာပေတို့မှာ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သော စာဖတ်ပရိတ်သတ်၏ လောကကိုထားဘိဦး။ မွတ်စလင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်လောက၌ပင် ကျယ်ပြန့်စွာ ထင်ပေါ်သင့်သလောက် ထင်ပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။”ဟူ၍ ဖော်ပြထားရာ အလွန်မှန်သောအဆိုအမိန့် ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ်စာပေများကို ရှာဖွေလေ့လာ ဖတ်ရှု သင့်ပါသည်။ သမိုင်းအရ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စာပေ အမွေအနှစ်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာပေများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အတွက် သမိုင်း အထောက်အပံ့ကောင်းများ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် စာဆိုတော်ဟာဂျီမှန်(၁၈၃၄-၁၉၀၅)၏ မြတ်ဆုရလင်္ကာကျမ်းမှာ ထင်ရှားပါသည်။ မန္တလေး ရတနာပုံပထမ မြို့တည်နန်းတည် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် သက္ကရာဇ်(၁၂၂၇)ခု တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော်(၃)ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြုစုခဲ့သည်။ ပိုဒ်ရေ(၇၂)ပိုဒ်နှင့် သံပေါက်လင်္ကာ ၁၆၈ပုဒ်ပါဝင်သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့၊ မန်းညွန့်ပုံနှိပ်တိုက်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ သစောင်ဝုဖ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မော်လာနာ ရူမီသခင်ကြီး၏ မဆ်န၀ီကျမ်းကို မှီးကာ လင်္ကာဖွဲ့ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွေကာ အပ်ကဗရ်ကျမ်းနှင့် စွလာတုလ် အာရေဖွီကျမ်းများလည်း ပြုစုခဲ့သည်။
ကိုလိုနီခေတ်အတွင်း မြန်မာစာပေနှင့် အူရဒူစာပေတိုက်ပွဲမှာလည်း ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ၁၈၂၄ သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ချိန်မှစ၍ အိန္ဒိယသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်လာ သည်။ ၁၉၁၅တွင် ၎င်းတို့ဦးဆောင်၍ မွတ်စလင်ပညာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖွဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများတွင် အူရဒူစာကို အဓိကထားသင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပသော ပဲခူးမြို့ညီလာခံကြီး၌ အူရဒူစာကို အဓိကထားသော အုပ်စုနှင့် မြန်မာစာကို အဓိက ထားသောအုပ်စုအယူအဆ ကွဲခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် မြန်မာစာကို အဓိက ထားသော အုပ်စုကသာ အားသာခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်က လူမျိုးအသီးသီး၏ ဘာသာစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားသည်။ အသိအမှတ်ပြုသည်။လူသားမျိုးနွယ် အုပ်စုတိုင်းအတွက် ရစုလ် တမန်တော်တစ်ပါး ပွင့်ရောက်ခဲ့သည်ဟူသော ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်(၁၀း၄၇)အရ -လူသားမျိုးနွယ် တိုင်း၏ ဘာသာစာပေတိုင်းကို လေးစားရမည်။ ယုတ်ညံ့နိမ့်ကျသောဘာသာစကားဟူ၍မရှိ။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်များကလည်း ဤအယူအဆ ကိုလက်ခံထားသည်။
ကိုလိုနီခေတ် ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၂ ခု(၁၅၅၀)သီပေါမင်း လက်ထက်တွင် ကျောက်ရုံးတော် အုပ်မင်း ပတ္တမြားကျောက်ကုန်သည် ပညာရှင် ပလီတကာဟာဂျီဦးမိုးက နမားဇ် ဖတ်နည်း နိသျည်း ကျမ်း တစ်အုပ်ကို မြန်မာအရဗီနှစ်ဘာသာဖြင့် ဘုံဘေမြို့တွင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ စာအုပ်အမည်မှာ ‘အဟ်ကာမွတ် ဆွလာတ်’ဖြစ်သည်။ ယင်းထက်အလျင်ကလည်း မန္တလေး ဂရာနာအဖွဲ့မှ ဖတ္တ၀ါဓမ္မသတ် ကျမ်းစာကို ကလကတ္တားမြို့တွင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့ သည်။ ၁၈၉၂ တွင် ရှိတ်အစ္စမာအင်၏ ဖကီများကျင့်စဉ်၊ ၁၈၉၃တွင် ရှမ်စွတ်ဒိန်၏ နဆီဟတုလ် အစ္စလာမ်၊ ၁၉၃၀ တွင် ခလီဖွာဟ်ဦးမြစ်၏ အန္န၀ါရေဗျစ္စမျစ်လာကျမ်းနှင့် အပ်စရားရေစူရဟ်ဖွာတေဟဟ်ခေါ် အလ်ဟမ် တဖ်စီရ် နှစ်ကျမ်းတွဲ၊ ၁၉၃၁တွင် စစ်ကိုင်းမြို့ မင်လမ်း မြောက်ရပ်နေ မုဟမ္မဒ်အီစာ၏ တမ်ဗျီယွလ် မုအမျေနီကျမ်း တို့ထွက်ပေါ်လာသည်။ထိုကျမ်းတွင်လင်္ကာသံပေါက်၃၉ပိုဒ်ပါဝင်သည်။
၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင်ဦးလှတင်၏ ‘မုဟရ်ရမ်နာမာနှင့် ရှဟာဒတ်ဗယမ်’ထွက်လာသည်။ မန္တလေးမြို့ ချွေတာရေး ပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အရဗီ၊ ဖာရစီ၊ ဟင်ဒီ၊ အူရဒူဘာသာများမှ ပေါင်းစည်း၍ မြန်မာ ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးလှတင်သည် အစိုးရမင်းတို့၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်ရမြန်မာစာညွန့်ပေါင်းကျမ်းပြုစုရေး အဖွဲ့တော်ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
[တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ်၊ အရဗျီမှ မြန်မာ ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခြင်း၊ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ စာ-၁၅၉၊ ၁၉၆၈၊ ဇန်န၀ါရီ]
၁၉၄၇ တွင် ဦးထွန်းကြွယ်က အရကနွလ် အစ္စလာမ်(အစ္စလာမ်အဓိက ကျင့်စဉ်ကျမ်း)ကို ပြုစုခဲ့သည်။ ဦးထွန်းကြွယ်သည် အစ္စလာမ်ပေါင်းချုပ်ကျမ်းဖြင့် အစ္စလာမ်စာပေ လောကတွင် ထင်ရှားပါသည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ပထမဦးဆုံး ဘာသာပြန်ကျမ်းကို ပထမကမ္ဘစစ်ကြီး မဖြစ်မီ ၁၉၁၂ ခုနှစ်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဘာသာပြန်ဆိုသူမှာ မန္တလေးမြို့၊ ရွှေဘုန်းရှိန်ရပ်၊ ရှမ်းစု စာတိုက် အနီးနေ ဟာဂျီ နုရွတ်ဒင်န် ခေါ်ဟာဂျီလူဖြစ်သည်။ မြိရ်ဇာဟိုင်ရသ်ရေးသားသော အုရ်ဒူ ဘာသာပြန် မှတဆင့် မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမြန်မာဘသာပြန် ကုရ်အာန်ကျမ်းများကို သူဌေးကြီး K.I.H ဦးဘအိုက အခမဲ့ ဓမ္မဒါနပြုခဲ့သည်။ အရဗီမူရင်းမပါဘဲ အဓိပ္ပာယ်သက်သက်နှင့်အတူ အာယတ်တော်ကျရောက်ခဲ့သည့် နောက်ခံသမိုင်းပါ ပါဝင်သည်။ လေ့လာသူများ ပိုမိုးပြည့်စုံစွာ လေ့လာနိုင်ရန် ဟာဂျီလူသည်သူ၏ မြန်မာဘာသာပြန် ကုရ်အာန်ကျမ်းကို အရဗီမှ တိုက်ရိုက်ပြန် ဆိုကာ ဒုတိယအကြိမ် အစအဆုံး ပြန်လည်ရေးသား၍ ၁၉၃၈တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် တစ်အုပ်တည်းသော အရဗီအင်္ဂလိပ် မြန်မာအဘိဓာန်ကြီးကို ၁၉၄၁တွင် ထုတ် ဝေခဲ့သည် ဒေါက်တဟာဂျီ အပ္ပဒူလ်ဂဖူရ်ခေါ် ဦးဘချို မော်လ၀ီမုဟမ္မဒ် ရာဟမတွလ္လာဟ်ဆပ်၊ မော်လ၀ီ အပ္ပဒူရာမာန်နဒ၀ီဆပ်တို့က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းဘာသာရပ် ပါမောက္ခဆရာကြီး ခါန်ဆာဟစ်ဘ်အဟ်မဒ်ကာစင်မ်က ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသည်။ စင်္ကာပူမြို့ အငြိမ်းစားတရားသူကြီး အလ်ဟာဂ်ျ ဟာဖိဇ်ဂိုလမ်ဆာရ်ဝါန်(M.A)၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုစုခဲ့သည့် အရဗီအင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ကိုအခြေခံ၍ မြန်မာပြန်ဆိုဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယမြောက် မြန်မာဘာသာပြန်ကို သီရိပျံချီ ဦးဘစိန်က ပြုစုခဲ့သည်။ မစ္စတာပစ်(က်)သောလ်၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် ကုရ်အာန်ကို အခြေခံပြုစုထားသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ အရဗီစာကိုယ်မပါ မြန်မာဘာသာပြန်သက်သက်ဖြစ်သည်။ တတိယမြောက် မြန်မာဘာသာပြန်ကို သီရိပျံချီ ဆရာကြီးဃာဇီနှင့် မောင်လာနာ မက္ကဆူးဒ် အဟ်မဒ်ခန် တို့က ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် စတင် ရေးသားသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာဘာသာပြန် ၁၀စောင်တွဲ ၃ တွဲထုတ်ဝေသည်။ ၁၉၇၇မှ ၁၉၈၀ခုနှစ် အတွင်းဖြစ်သည်။ အကျယ်ပြန်ဆိုချက် အလင်းပြန်ကျမ်း အစောင် ၃၀ ကိုလည်းထုတ်ဝေသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကစပြီး ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် အတွဲအစအဆုံး ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေပြီးဖြစ်သည်။ အရဗီမြန်မာယှဉ်တွဲဖော်ပြထားသည်။
မော်လာနာမုဟမ္မဒ်မူစာ(မဇွာဟေရီ)ကလေည်း မုသွေ့ဟွလ်ကုရ်အာန်ဟူသော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ မြန်မာဘာသာပြန်ကို အစောင် ၂၁ မှ ၃၀အထိ ပြန်ဆို၍ ၁၉၇၅နှင့် ၇၆ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးမောင်လာနာ မက္ကဆူးဒ်အဟ်မဒ်ခန်းကလည်း ကုရ်အာန် ဘာသာပြန်ကျမ်း အစ အဆုံး ပြန်ဆိုရေးသား၍ စာကူးစက်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မောင်ဒူဒီ၏ တဖဟီးမုလ်ကုရ်အာန်ကို ဘာသာပြန်ဆို ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ဟဒီးဆ်(တမန်တော်မြတ်၏သြ၀ါဒ)၊ စိရတ်(တမန်တော်မြတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ) နှင့် ကျင့်ရန်ကြဉ်ရန် ဘာသာရေးသက်သက် စာပေတို့မှာ အမြောက်အမြားပင် ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါ သည်။ ဘာသာရေး ပညာရှိကြီးများဖြစ်သည့် မော်လ၀ီဟစံရှား၊ ဦးရွှေယွန်း(မြိတ်)၊ မုဖ်တီဆွာလေအမီနီ၊ မော်လာနာအိဗ်ရာဟင် (မော်လမြိုင်)၊ သီရိပျံချီ အလ်လာမဟ်ဃာဇီ မုဟမ္မဒ်ဟာရှင်၊ မော်လာ နာနူးရ်မုဟမ္မဒ် (ကမ္ဘာ့အလင်း)၊ အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ ဟာရှင်ဆာနီဦးကျော်အေး၊ မော်လာနာမူဆာ (မဇွာဟေရီ)၊ မော်လာနာ ဦးခင်မောင်ကြီး၊ မော်လာနာ ဦးခင်ရွှေ၊ ဆရာကြီးစီအေ ဦးဗလွင်၊ ဆရာကြီး အမ်အေဂနီ၊ ဆရာကြီးဓူဝံဂနီ၊ ဆရာကြီးဦးအဟ်မဒ်၊ သီရိပျံချီ ဦးဘစိန်၊ သီရိပျံချီ ဦးဘသောင်း၊ ဒဂုန်သိန်းနှင့် သမိုင်းပညာရှိ များဖြစ်သည့် ရွှေဘိုဦးဘဦး၊ ရှေ့နေဦးမြ၊ဆရာချယ်၊ ဗိုလ်မှူးဘရှင်တို့၏ ဘာသာရေးနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာပေများအမြောက်အမြားပင်ဖြစ်ပါသည်။ မျက်မှောက် ခေတ်တွင် ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ဘာသာရေး စာပေမှ အချို့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာရန် စာအုပ်စာရင်းအဖြစ် ဤသင်ခန်းစာ၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
မြန်မာမှုပြု အစ္စလာမ်စာပေနယ်ပယ်တွင်ဝတ္ထုများ၏ အင်အားမှာလည်း မသေးလှပါ။ ၁၈၈၉တွင် မုဟမ္မဒ်ရှမ်ရှုဒင်ခေါ် စာရေးမောင်ဘိုးခင်၏ ဟာတင်တာယီဝတ္ထုထွက်ပေါ်လာသည်။ မြန်မာစာပေ သမိုင်းတွင် ပထမမြန်မာ ကာလပေါ်ဝတ္ထုဟု အသိအမှတ်ပြုထားသော ဂျိမ်းစ်လှကျော်၏ မောင်ရင်မောင် မမယ်မ၀တ္ထုမှာ ၁၉၀၄ တွင်ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဟာတင်တာယီ ၀တ္ထုမှာ မြန်မာကာလ ပေါ်ဝတ္ထု၏ သန္ဓေတည်ရာဖြစ်သည်။”မြန်မာစာပေသမိုင်းတွင် ၁၈၈၉ခုနှစ်၌ မြန်မာမွတ်စလင် မောင်ဖိုးခင်ခေါ် မူဟာမက်ရှမ္မရှုဒင် သည်အရဗီဘာသာမှ ဟာတင်တာယီဝတ္ထုကို ဘာသာပြန်သည်။ (အီစွတ်ပုံပြင် ဘာသာပြန်လည်းရှိသည်။ သို့သော်ယင်းမှာဝတ္ထုရှည်အဖွဲ့၌ အကျုံးမ၀င်) ၁၉၀၂ ခု၌လည်းခရစ်ယာန် သာသနာပြု အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ရောဘင်ဆန်ကရူးဆိုး ၀တ္ထုကိုဘာသာပြန်သည်။ ၁၉၀၄ခုနှစ်တွင် ဂျိမ်းစ်လှကျော်က ဒူးမား၏မွန်တီခရစ္စတို မြို့စားကြီးကိုမှီး၍ မောင်ရင်မောင် မမယ်မကို ရေးသည်။ မောင်ရင်မောင် မမယ်မကို နှောင်းလူတို့အသိများသောကြောင့် ယင်းကိုပင် အနောက် တိုင်းနိုဗယ်အဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်သောပထမကာလပေါ်ဝတ္ထုဟုမှတ်ယူလျက်ရှိကြ၏။ စင်စစ် အဆိုပါဝတ္ထု အဖွဲ့၏ ကလလရေကြည်တည်ခြင်းကို အစရှာကြည့်လျှင် ဟာတင်တာယီနှင့် ရော်ဘင်ဆန် ကရူးဆိုးတို့ ၌ ရှာ၍တွေ့သည်။ ဟာတင်တာယီကို အာရဗီဘာသာ မှတစ်ဆင့် ယူသည့် တိုင်အောင်ထိုအဖွဲ့သည် အနောက်တိုင်း နိုဗယ်အဖွဲ့၌ အကျုံးဝင်သည်။”
[မောင်ထင်၊ တရုတ်နှင့်ဂျပန်စာပေသမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့စာပေအညွှန်း၊ စာ-၂၂၁၊ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်၊ ၁၉၇၆]
၁၈၉၆တွင် ဒေါက်တာရှိတ် အဗ္ဗဒူရာမန်၏ပသီပုံပြင် ၀တ္ထုကြီးထွက်ပေါ်လာသည်။ မြန်မာစာ ပေနယ် တွင် ယနေ့တိုင်သြဇာကြီးမားလျက်ရှိပါသည်။ ”လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်ရာခန့်က မြန်မာစကားပြေ အရေး အသားအဖြစ် တန်ဖိုးရှိလှသည့်အပြင် မြန်မာမှုများထင်ဟပ်နေသော စာပေလက်ရာအဖြစ်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။”
၁၈၉၈တွင်မောင်လာအလီသခင်ဝတ္ထု၊ ၁၈၉၈တွင် မုဟမ္မဒ်ကာဆင်နှင့် မုဟမ္မဒ်ယူဆွပ်တို့၏ဘာဂို ဘဟာရ်ဝတ္ထု၊ ၁၉၀၂တွင် မောင်ကာဆင်၏ အမြိရ်ဟမ္မဇာ ၀တ္ထုရာဇ၀င်တော်ကြီး၊ ၁၉၀၄တွင် ဦးကာဆင်၏ ယူဆွဖ်ဇုလိုင်ခါ မင်းသားမင်းသမီး ဇာတ်နိပါတ်ဝတ္ထုတော်ကြီး၊ ၁၉၀၇တွင် ဦးမြစ် နှင့်ဦးမြ၏ အမြိရ်ဟမ္မဇာ ၀တ္ထုရာဇ၀င်တော်ကြီး၊ ၁၉၀၇တွင် ဦးမြစ်၏ ယူဆွဖ်နဗျီကစ်ဆွာ ၀တ္ထုတော်ကြီး၊ ၁၉၀၉ခုနှစ်တွင် စာဆိုတော် ဟာဂျီမှန်၏ သားမောင်ကြင်ရေးသည့် ကစ်စွာစွလ် အမ်ဗြေယာကျမ်းတို့ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၁၁ တွင် စာဆို အများစုပေါင်းရေး၍ မောင်လှတင် တည်းဖြတ်သည့် ဘီဘီခတီဂျာ သခင်မ၀တ္ထုတော်ကြီးထွက်ခဲ့ပါသည်။ ”တို့ဗမာမွတ်စလင်မ် စာရေး ဆရာကြီးများ၏လက်ရာအဖြစ် လူသိနည်းပါးသည့်အပြင် စာပေလောကတွင် ဘာသာပြန် ၀တ္ထုများ အဖြစ် ထင်ရှားသင့်သလောက် မထင်ရှားခဲ့သည်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။
” [သီရိပျံချီ ဦးသာမြတ်၊ တို့ဗမာမွတ်စလင်ကြီးများ၏ လက်ရာများ၊ မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၅၉၊ ဖေဖော်ဝါရီ]
Pathi	Leaveacomment
မြန်မာအတွင်းသို့ ရောက်ရှိအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များမှာ (၁) အာရဗ်များ၊ (၂) ပါရှန်း၊ (၃) တရုတ်၊ (၄) ကသည်းများ၊ (၅) အိန္ဒိယသားများနှင့် (၆) အခြား လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ (၁) အာရပ်များ ပုဂံခေတ် ပိဿုံမင်းလက်ထက် အေဒီ(၇)ရာစုတွင် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့များဖြစ်သည့် သထုံ၊ မုတ္တမသို့ဝင်ရောက် နေထိုင်ကြခဲ့သည်။ ရခိုင်ဘုရင် မဟာတိုင်စန္ဒလက်ထက် (အေဒီ ၇၈၈-၈၁၀)တွင် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်၍ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျား တရုတ်ပြည်သို့ကုန်ကူးရာ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီးတွင် သင်္ဘောပျက်၍ ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အေဒီ(၁၄)ရာစုတွင် ကုန်သည်တချို့သည် မြိတ်မြို့တွင် ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၂) ပါရှန်းများ အာရဗ်ကုန် သည်မျးနည်းတူ ကုန်ကူးသန်းရာမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေဒီ(၁၃)ရာစု တွင် ယခင် ပသီမြို့(ယခု ပုသိမ်)ကို ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပုသိမ်မြို့ကို ကုလားပသီမင်း (၃)ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ (၁) ပသီမင်း[နန်းစံသက် ၈-နှစ်] (၂) အော်လန်တေးမင်း[နန်းစံသက်-၁နှစ်] (၃) အက္ကဘတ်မင်း[နန်းစံသက်၃-နှစ်] (၃) တရုတ်များ မြန်မာသက္ကရာဇ်(၆၄၃)ခု နရသီဟပတေ့မင်း(တရုတ်ပြေးမင်း)လက်ထက်တွင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း တရုတ် ပြည်ဘက်တွင် တရုတ်မောင်းဂွတ်ဘုရင် ကုဗလေခန်ရဲ့ တာရ်တာရ်စစ် သည်များ ပုံဂံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၂၈၁-ခုနှစ်၊ ဒုတိယတရုတ်မြန်မာစစ်ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးနဇရွတ်ဒင်ခေါင်းဆောင်သော တာရ်တာရ် စစ်သည်များသည် ကောင်းစင်(ယခု ဗန်းမော်မြို့)ကို သိမ်းပိုက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၄) ကသည်းများ ၁၈၂၁-ခုနှစ်တွင် မဟာဗန္ဓုလဦးစီးသည့်တပ်များသည် အာသံ(ကသည်းပြည်)သို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ အောင်နိုင်သဖြင့် ကသည်းသုံ့ပန်း(၄၀၀၀၀)ကျော် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ထက်ဝက်ခန့်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များဖြစ်သည်။ (၅) အိန္ဒိယသားများ အိန္ဒိယပြည် ဘက်မှလည်း အိန္ဒိယ၊ မဂိုများ၊ ဘင်္ဂါလီများသည် ကုန်းကြောင်းမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဥဒယိုဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ကြသည်။ အနောက်ဘက်လွန်မင်း (၁၆၀၅-၁၆၂၈)ခုနှစ်တွင် တောင်ငူဘုရင် နတ်သျင်နောင် နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားရာ နတ်သျင်နောင်က သံလျင်စား ငဇင်ကာထံအကူအညီတောင်းခံသဖြင့် ငဇင်ကာက သင်္ဘော (၄)စီးစေလွှတ်ခဲ့ရာ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင် အနောက်လွန်မင်းကစစ်နိုင်သဖြင့် ငဇင်ကာ နှင့် နတ်သျင်နောင်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ သုံ့ပန်းများကိုမသတ်ဘဲ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင် ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအား နေရာအတည်တကျချထားပေးပုံ အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးသည် စစ်သုံ့ပန်းများကို အင်းဝမြို့၊ မြစ်သာမြစ် မြောက်ဘက်တွင် နေရာ အတည်တကျချထားပေးခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် ရွှေဘို၊ ကျောက်တည်၊ စစ်ကိုင်းနယ်များတွင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရန် မြေနေရာများကို တည်တကျ ချထားပေးခဲ့သည်။ စနေမင်းလက်ထက် (၁၆၂၈-၂၆၄၉)ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် တောင်ငူ၊ ရမည်းသင်း၊ ညောင်ရမ်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ၊ ပင်းယ၊ တဘက်ဆွဲ၊ ဘောဓိ၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ၊ မြေဒူး၊ ဒီပဲရင်း စသော မြို့ကြီးများတွင် နေရာအတည်တကျချပေးခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းခေတ်လွန် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘိုးတော်ဗဒုံမင်း လက်ထက် (၁၈၀၁)ခုနှစ်တွင် အမရပူရနယ်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် ဗုံးအိုး၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စားကြင်ဝရွာများတွင် နေရာအတည်တျကချပေးခဲ့သည်။ နောင်အခါ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆက်နွယ်ပေါက်ဖွားလာသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများ သည် ရမည်းသင်း၊ ယင်းတော်၊ ပျဉ်းမနား အစရှိသည့်မြို့ကြီးများတွင် အစုအဝေး လိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများမှာ ဗမာဘုရင်များလက်ထက်တွင် ပသီလူမျိုးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၄၇၀၊ ၄၈၂၊ ၅၁၄)၊ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး တတိယတွဲ စာမျက်နှာ(၆၊ ၈၆၊ ၉၀၊ ၁၃၅၊ ၂၃၆၊ ၃၁၉) တို့တွင် ပါရှိသည့်အထောက်အထားများအရ ဗမာဘုရင်များလက်ထက်တွင် ပသီလူမျိုးအဖြစ် အခိုင်အမာ တည်ရှိ ခဲ့သည်။ ဗမာပြည်အား အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ များသိမ်းယူပြီး နောက်ပိုင်း မှစ၍ ၁၉၃၁-ခုနှစ်အထိ ပသီလူမျိုးများအား ဇေတဘာဒီလူမျိုးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁-ခုနှစ်မှ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလအထိ ဗမာမွတ်စလင်မ်များဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံနေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်မ် တနည်းအားဖြင့် ပသီများဟု သတ်မှတ်ခံနေရသူများသည် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ မျိုးတူစုတစ်စုတည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ သွေးတူစု၊ ဇာတ်တူစုတစ်စုတည်းမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုးသည် လူမျိုးပေါင်းစုံမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာတတ်ခြင်းကို အောက်ပါသာဓကများအရ သိနိုင် ပေသည်။ ယနေ့ဗမာလူမျိုးသည် ဗမာလူမျိုးအဖြစ် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ (ပျော့၊ ပျူ၊ ကမ်းယံ၊ သက်၊ ရခိုင်၊ ထားဝယ်၊ တိဘက်)စသည့် လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားထင်ရှားကျော်ကြားသည့် လူမျိုးအချို့သည်လည်း ဤနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် အီတလီလူမျိုးများသည် ကျူထရွန်၊ အီထရပ်စက်၊ ရောမ၊ ဂရိတ်၊ အာရဗ် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွား လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများသည်လည်း ဂေါ်လ်၊ ဘရီထွန်၊ ကျူထရွန် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှော ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်များ(၀ါ)ပသီများသည်လည်း နိုင်ငံခြားမှလူမျိုးတစ်မျိုး၊ အိမ်ထောင်စုများမှ ဆင်းသက် လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အထက်ဖော်ပြပါလူမျိုးများမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်မှာ အခိုင်အမာပြနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ ဘုရင်များလက်ထက်တွင် နေထိုင်ရန်ဒေသများထူထောင်ပေးပြီး ပသီလူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ခြင်းမှာ ရာဇ၀င် အစောင်စောင်တို့အရ ထင်ရှားပေသည်။ လူမျိုးဆိုသည်မှာ ‘လူမျိုးဆိုသည်မှာ အခြေခံအားဖြင့် လက္ခဏာ(၄)ရပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။ တိကျသောလူ့ အစုအဝေး တစ်ရပ်ဖြစ် ရမည်။ ဤလူ့အစုအဝေးသည် အမျိုးအနွယ်လိုက်လည်းမဟုတ်။ မျိုးရိုးဇာတိ အရလည်းမဟုတ်။ သမိုင်းရေးရာအရ ဖွဲ့စည်းမိလာသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ရမည်’ဟု အဆိုရှိခဲ့သည်။ လူမျိုးဆိုသည်မှာ လူမျိုးရေးလက္ခဏာ(၄)ရပ်ရှိမှသာ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (၁) တူညီသော ဘာသာစကား (Common language) ရှိရမည်။ (၂) တူညီသော နေထိုင်မှုနယ်မြေဒေသ (Common territory) ရှိရမည်။ (၃) တူညီသောစီးပွားရေးဘ၀ စုစုစည်းစည်း (Common Economic Cohesion) ရှိရမည်။ (၄) တူညီသော ယဉ်ကျေး မှုအားဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသသော တူညီသောစိတ်နေသဘောထား (Common psyehological make-up, which manifestiteself inaCommon Culture) ရှိရမည်။ ဤလူမျိုး ရေးလက္ခဏာကြီး(၄)ရပ်သည် ကမ္ဘာကမငြင်းနိုင်သည့် လူမျိုးရေးတိုင်းတာချက်လက္ခဏာ(၄)ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ (၁) ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသည် ဗမာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့်လူများစုသုံးစွဲနေသည့်စကားကိုပင် တူညီစွာ အများစုသုံးစွဲပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တူညီစွာပြောဆိုသည့်ဘာသာစကားရှိပါသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်ရန်အတွက် သီးခြားဘာသာစကားတစ်ရပ်မလိုပေ။ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို လူမျိုး(၂)မျိုး(၃)မျိုး သုံးစွဲနေသော သာဓကများ ကမ္ဘာတွင်ရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန် လူမျိုးတို့သည် ဘာသာစကားတူညီကြသည်။ သို့သော် လူမျိုးမတူ။ နော်ဝေဂျင်းနှင့် ဒိန်းလူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် အိုင်းရစ်လူမျိုးတို့သည် လူမျိုးမတူကြသော်လည်း ဘာသာ စကား တူညီကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်လည်း ဟံလူမျိုးနှင့်ဟွီလူမျိုး များသည်လူမျိုးချင်းမတူသော်လည်း ဟံဘာသာစကား ကိုသာ ပြောဆိုသုံးစွဲကြသည်။ (၂) တူညီစွာ နေထိုင်မှု ဒေသဆို သည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးသည် သီးခြားပြည်နယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် နေထိုင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဒေသတော်တော်များများတွင် ပြန့်ကြံနေထိုင်မှုမျိုးလည်းရှိသည်။ ဟိုတစ်စု သည်တစ်စုနေ ထိုင်ကြသော်လည်း တစ်ပြည်လုံးအနေနှင့်ကြည့်လျင် အစုအဝေးပေါင်းများစွာ စုစည်းနေထိုင်မှုရှိ/မရှိ စံနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပုံစံတူညီစွာ နေထိုင်မှု ရှိ/မရှိသာလျင် အဓိကဖြစ်သည်။ သီးခြားပြည်နယ်မရှိသော်လည်း သီးခြားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေခြင်းကို ကမ္ဘာတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ (ဥပမာ တရုတ်ပြည်ရှိ အိုလွန်ချွန်လူမျိုးစုကလေးသည် တရုတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးမှ လူဦးရေ (၂၀၀၀)ခန့်သာရှိပေသည်။ လူဦးရေ(၂၀၀၀)လောက်မှာ (၂)စုလောက်သာကွဲနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြန့်ကြဲနေထိုင်ကြ သည်မှာ ထင်ရှားပေသည်။ တရုတ်ပြည်၏ ဟွီလူမျိုးနှင့်အိုလွန်ချွန်လူမျိုးတို့၏ ပြန့်ကြဲနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် ဗမာမွတ်စလင် (၀ါ)ပသီလူထု၏နေထိုင်မှုပုံစံသည် အလွန်နီးစပ်လှပေသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီများ၏နေထိုင်မှုသည် ကျေးရွာ ကြီးများတွင် ရွာလုံးကျွတ်နေထိုင်ကြခြင်း၊ မြို့ကလေးများတွင်အတန်းလိုက် အစုလိုက်နေထိုင်ကြခြင်း၊ မြို့ကြီးများ တွင် ရပ်ကွက်ကြီးများအလိုက်နေထိုင်ကြခြင်းကို တွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။ [ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစုသည် သီးခြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်နေထိုင်ကြသည့်လက္ခဏာမရှိပေ။ ပြန့်ကြဲနေထိုင်ကြသည့် လူမျိုးစုဖြစ်သည်။] (၃) တူညီ သည့် စီးပွားရေးဘ၀ စီးပွားရေးစုစုစည်းစည်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပေသည်။ ဗမာနိုင်ငံသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗမာ့စီးပွားရေးသော့ချက်သည် ဆန်စပါး လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၄င်းဆန်စပါးလုပ်ငန်းကို ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးအများစုလည်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ အခြားလူ့အစုအဝေးကိုကြည့်လျင် အလုပ်သမား၊ မြို့နေလူ တန်းစား စီးပွားကုန်သွယ်ရေးသမားများ၊ ပညာတတ်များ၊ စာရေးစာချီများရှိသည်။ ယနေ့ မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုတည်း၏အောက်တွင် စုစုစည်းစည်းရှိကြခြင်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ (၄) ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံးမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော နေထိုင်စားသောက်ပြောဆို ဆက်ဆံရေးများသည် တူညီသည့်စိတ်နေသဘောထားမှ ထုတ်ဖော်ပြ သချက်များဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံးမှ ယဉ်ကျေးမှုများသည် လူမျိုးစုတစ်ရပ်တွင်တူညီစွာရှိနေကြသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစု၏ယဉ်ကျေးမှုသည် ကိုးကွယ် ရာဘာသာနှင့်တွဲနေခြင်းရှိသည်မှာ အခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယှဉ်ကြည့်လျင် မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံးအတွက်မူ တူညီသော ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသသော တူညီသည့်စိတ်နေစိတ်ထားရှိသည်ကို အခိုင်အမာတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူထုသည့် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရန်လက္ခဏာကြီး(၄)ရပ်နှင့်ကိုက်ညီနေပါသည်။ အထက်ပါလက္ခဏာကြီး(၄)ရပ်အပြင် (၁) လူမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပုံ အထောက် အထား ခိုင်လုံခြင်း၊ (၂) သမိုင်းရေးအရ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခိုင်မာလျက်ရှိခြင်း၊[လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော်မှစ၍ သမိုင်းရေးရာအရ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် အမျိုးသား ရေး လက္ခဏာ(၄)ရပ် ချို့ယွင်းမှုမရှိဘဲ ခိုင်မြဲစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။] (၄) အနာဂတ်အတွက်လည်း တည်ငြိမ်စွာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လျက်ရှိခြင်း အစရှိသည့် အထောက် အထားများအရ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလ၊ ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလနှင့် အနာဂတ် ကာလများတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လူမျိုးရေး လက္ခဏာ ချက်များအရတွေ့ရှိသည်မှာ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီများသည် အတိတ်ကာလအတော်ကြာကပင် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ပီပီသသ ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစုသည် အတိတ်ကာလအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မိမိလူမျိုးရေးကို ဖုံးကွယ်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်မှ လူမျိုးစုပြန် လည် ပေါ်ထွက်လာရန် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ကြရပေမည်။ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီ လူထုတစ်ရပ်လုံးအား လူမျိုးပီသနေခြင်းကို တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာက အသိအမှတ် ပြုလာစေ ရေးအတွက် ထူထောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ကိုကိုလေး(ဗပက) @ ပသီဦးကိုကိုလေး။ ၁၉၅၀ ကျော် ၆၀ ၀န်းကျင်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “ခေတ်(၅)ခေတ်နဲ့ လူတန်းစားပြဿနာ”ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေ ကောက်နှုတ်ပြီး ၂၀၀၅-ခုနှစ်လောက်က နေရာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းများကို မူရင်းစာအုပ်ထဲမှအတိုင်းသာ ကူးယူထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိကြသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား နာမည်များကို ဖေါ်ပြလိုက်သည်။
(၁)ရိုဟင်ဂျာ (RoHingya) လူမျိုး
(၃)ပန်းသိဃ်-ပန်းသေး Panthay လူမျိုး
(၄)`ပသီ´-မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူမျိုး Par-thi, Far-si
(၅) ပသျှူးလူမျိုး Continue reading →
Panthays are the oldest group of Chinese Muslims in Burma. They live in the northern regions of Burma (formerly known as Upper Burma), particularly in the Tangyan-Maymyo-Mandalay-Taunggyi area and Shan States. The word ‘Panthay’ is the Burmanized form of ‘Pan-si’, the name these people use for themselves,aterm used in Yunnan and not other Chinese provinces. (Wiley Online Library)
The history of the Panthays in Burma was inseparably linked to that of Yunnan, their place of origin, whose population was predominantly Muslim. The Chinese Muslims of Yunnan were noted for their mercantile prowess. In the pre-colonial times the Panthays emerged as excellent long-distance caravaneers of southern China and northern Southeast Asia. The Chinese Muslim domination of the Yunnan caravan network seems to have continued well into the 20th century. By the mid 19th century the caravans of’ Yunnanese traders ranged over an area extending from the eastern frontiers of Tibet, through Assam, Burma, Thailand, Laos and Tongking, to the southern Chinese provinces of Szechwan, Kweichow and Kwangsi.
The merchandise brought from Yunnan by the Panthay caravaneers included opium, wax, silk cloth, tea, metal utensils, iron in the rough, felts, finished articles of’ clothing, walnuts, preserved fruits and foods, and dried meat of’ several kinds. The Burmese goods taken back to Yunnan were raw cotton, raw and wrought silk, amber, jades and other precious stones, velvets, betel-nuts, tobacco, gold-leaf’, preserves, paps, dye woods, stick lac, ivory, and specialized foodstuffs such as slugs, edible birds’ nests, among other things (Anderson, 1876, 4). Raw cotton, which was reserved asaroyal monopoly, was in great demand in China. Besides the caravaneers, there were other Panthays, though very small in number, who came to Burma, to trade in jades and other precious stones. They were chiefly interested in the jade mines of northern Burma and ruby mines of Mogok. With whatever purpose they had come to Burma, most of these early Panthays, whether caravaneers or precious-stone dealers, had no intention of taking permanent residence in the Burmese Kingdom. They came and went only as itinerant merchants. They were all men who never brought their wives and families along, since alone could have made such perilous and rigorous journeys of those days. This is the reason why no evidence of the existence of Panthay settlement anywhere in the Burmese Kingdom prior to the Konbaung period has yet been found. Beginning from the late Konbaung period, however, the Panthays started to settle in the royal capital of Mandalay, particularly during the reign of King Mindon. Although their number was small,afew of them seemed to have found their way inside the court as jade -assessors. They lived side by side with non-Muslim Chinese (T’ang Chinese) at Tayoktan(Chinatown) which had been designated by King Mindon as the residential area for the Chinese. The T’ang Chinese had started settling in Mandalay considerably earlier than the Panthays so that by the time the latter arrived, there already wasaChinese community at Mandalay, with their own bank, companies and warehouses and some kind of organized social and economic life. It happened that there were also Chinese jade-assessors in the employ of the king. Rivalry between the Chinese and Panthay jade-assessors in courting the royal favor naturally led toaquarrel between the two groups, resulting inanumber of deaths.
The Panthay rebellion of 1855-73. Islam beinganon-indigenous religion of China, the Chinese Muslims Panthays tended to form in China exclusive circles. They resisted the unifying influences of Manchu China, earning for themselves the hatred of the T’ang Chinese of whose oppression they had become victims. Starting from 1855 the Muslim majority of Yunnan had risen against the oppression to which they were subjected by the mandarins. The mandarins had secretly hounded mobs on to the rich Panthays, provoked anti-Muslim riots and instigated destruction of their mosques (Anderson, 1876, 233). The widespread Muslim desire for revenge for insults to their religion led toauniversal and well-planned rising. The Panthays came out ahead in the initial phases of’ the rebellion, wresting important cities of the Imperial mandarins. The Chinese towns and villages which resisters were pillaged, and the male population massacred, but the places, which yielded, were spared (Anderson, 1876, 233). The ancient holy city of Tali-fu fell to the Panthays in 1857. With the capture of Tali-fu, Muslim supremacy became an established fact in Yunnan. The Islamic Kingdom of Yunnan was proclaimed after the fall of’ Tali-fu. Tu Wen-hsiu, leader of the Panthays, assumed the regnal title of Sultan Suleiman and made Tali-fu his capital.
In this way, the Sultanate appeared in Yunnan. Panthay governorships were also created inafew important cities. The Panthays reached the high watermark of their power and glory in 1860. It was also during this time that King Mindon granted the Panthays were given the rare favor of choosing their own place of residence within the confines of the royal capital, and they chose the site on which the present-day Panthay Compound (Chinese Muslim Quarter) is located. The establishment of the Panthay Mosque in 1868 marked the emergence of the Chinese Muslims asadistinct community at Mandalay. Although the number of this first generation of Panthays remained small, the Mosque, which is still standing, constitutesahistoric landmark. It signifies the beginning of the first Panthay Jama’at (Congregation) in Mandalay Ratanabon Naypyidaw.
Panthay (Burmese: ပန်းသေးလူမျိုး MLCTS: pan: se: lu myui: isaterm used to refer to the predominantly Muslim Hui people of China who migrated to Burma. They are among the largest groups of Burmese Chinese, and predominantly reside in the northern regions of Burma (formerly known as Upper Burma), particularly in the Tangyan-Maymyo-Mandalay-Taunggyi area and Shan States.
The name Panthay isaBurmese word, which is said to be identical with the Shan word Pang hse. It was the name by which the Burmese called the Chinese Muslims who came with caravans to Burma from the Chinese province of Yunnan. The name was not used or known in Yunnan itself.
Insofar as can be ascertained, the application of the term “Panthay” to Yunnanese Muslims (and, subsequently, to Burmese Muslims of Yunnanese origin) dates from about this time; certainly it was widely employed by British travelers and diplomats in the region from about 1875, and seems to have arisen asacorruption of the Burmese word pa-the meaning simply “Muslim”. A considerable body of literature exists surrounding the etymology of this term, but the definitive notice (which remains, as yet, unpublished). Indicated that it was introduced by Sladen at the time of his 1868 expedition to Teng-yueh, and that it represents an anglicised and shortened version of the Burmese tarup pase, or “Chinese Muslim”.
History Panthay	Leaveacomment
The Panthay (Chinese Muslims) of Burma and Yunnan
ပေါက်တော မြို့နယ် ဒုံးရွာက ဒေါ်နူရ်ဘီရှုနာ (အသက် ၆၈ နှစ်)
စစ်တွေ ။ ။ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ မဟာဆင် မုန်တိုင်း ၀င်မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ပေါက်တော မြို့နယ် ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အများစုဟာ ဆင်တက်မော်ကို မေလ (၁၃) ရက်နေ့မှာ မုန် တိုင်း ရှောင်ဖို့ ထွက်ခွာ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မုန်တိုင်း ရှောင်တဲ့ စက်လှေ တွေထဲက ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော် တင်ဆောင် လာတဲ့ စက်လှေ တစ်စီး ဟာ မေလ (၁၃) ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ (၂) နာရီ လောက်မှာ နစ်မြှပ်ခဲ့ပြီး၊ ၄၃ ဦး အသက်ရှင် နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၈၁ ဦး သေ ဆုံး ခဲ့ ရတယ်။ သေဆုံး သူတွေထဲက အလောင်း (၂) လောင်းကို သာပြန်လည် ရရှိခဲ့ပြီး၊ ကျန် တဲ့ ၇၉ ဦးထဲက ၆ ဦးရဲ့ အလောင်းကို မောင်တော မြို့နယ် မြင့်လွတ်ရွာမှာ ပြန်ရခဲ့ သလို၊ ဘင်္ဂ လား ဒေ့ ရှ် နိုင်ငံ တပ်ခ်နာဖ်မြို့မှာ ၃၁ ဦးရဲ့ အလောင်းကို ပြန်လည် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက်ရှင် နိုင်ခဲ့သူ တွေထဲမှာ ပေါက်တော မြို့နယ် ဒုံးရွာက အသက် ၆၈ နှစ် အရွယ် ဒေါ်နူရ်ဘီရှုနာ (ဘ) ဦး ချောရ် အလီ လည်းတစ်ဦး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်နူရ်ဘီရှုနာ ရဲ့ပြောပြ ချက်အရ သူမရဲ့ သားသမီး၊ မြေး၊ ဆွေမျိုး အရင်းအချာ ၃၁ ဦး သူမနဲ့ အတူ စက်လှေ ပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ ပါတယ်။ သူမ အတူ ပါလာတဲ့ မိသားစုဝင် ၃၁ ယောက်လုံး အသက် ဆုံးရှုံး သွားပေမယ့် လည်း သူမကတော့ ရေ ထဲ မှာ မျောနေ ခဲ့ပြီး မေလ (၁၅) ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ လောက်မှာ စစ်တွေမြို့ ဘော် ဂါဒေလ် ကျေး ရွာက တံငါသည်တွေက မျောနေတာကို တွေ့ပြီး ကယ်ဆယ် ခဲ့လို့ အသက် ဆက် ရှင် နိုင်ခဲ့တယ်။
အခုလည်း ဒေါ်နူရ်ဘီရှုနာကို ဘော်ဂါဒေလ် ရွာမှာ စောင့်ရှောက် ထားကြတယ်။ သူမကတော့ ဆုံးရှုံး သွား တဲ့ မိသားစုဝင် ၃၁ ယောက် အတွက် ယူကျူံးမရ ဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ အတော်လေး ၀မ်းနည်း ပူဆွေး သောက ရောက်နေ တယ်လို့ ဒေသခံ တွေရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။
Published on May 9, 2013 by အေးနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဂျီဟတ်စစ်ပွဲဆင်နွဲဖို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဘာသာရေးဆရာတဦးက လှုံ့ဆော်တာကို လုံးဝ လက်မခံဘူးလို့ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးက သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီလ ၆ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် အစိုးရက အကာအကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်အပါအ၀င် ရခိုင်အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးဝဏ္ဏရွှေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ဒီကြေညာချက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ တိုက်ခိုက်ခံရတာ ရှိတယ်။ ဗလီကျောင်းတော်တွေ ဖျက်ဆီးခံရတာ ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာက ကျနော်တို့ကို စာနာမှုပြတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တာ တချက်။ စာနာတဲ့ထဲမှာတောင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျနော်တို့နိုင်ငံက အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် လှုံ့ဆော်တာတွေလည်း တဖက်က ပြန်တွေ့ရတယ်။ အဲဒီဟာမျိုးကို လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ သဘောထား။ နောက်ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြတာက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိထိရောက်ရောက် ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တင်ပြတာရှိတယ်။ နောက် အကူအညီတွေ ပေးဖို့ ပြောထားတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒီပြစ်မှု ကျူးလွန်တဲ့ သူတွေကိုပဲ အပြစ်ပေးပြီး အပြစ်မရှိတဲ့ သူတွေကို အပြစ်ပေးတဲ့ဟာကို ကျနော်တို့ ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ မလိုလားဘူး၊ လက်မခံဘူးဆိုတာ ကြေညာတာ။
ဂျီဟတ်အဖွဲ့ သုံးနှုန်းတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါ။
“ကျနော်တို့စာထဲမှာ ဂျီဟတ်ဆိုတာ မပါဘူး။ ကျနော်တို့ညီနောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် လှုံ့ဆော်တာကို ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။ အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေကို အရေးယူဖို့ပဲ ကျနော်တို့က မီးမောင်းထိုးတာပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံအပြင် ကျန်တဲ့နိုင်င့တွေမှာ ရောက်နေတဲ့ လူမျိုးဘာသာမရွေး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေက တာဝန်ယူပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာပါ။”
ဦးဝဏ္ဏရွှေတို့အဖွဲ့တွေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အကူညီပေးရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွားရောက်ဖေးမကူညီတာတွေရော အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိရဲ့လား။
“ကျနော်တို့ သွားရောက်ကူညီနေတာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပျက်တဲ့နေရာတွေက များတယ်၊ ကူညီရမယ့် ပမာဏက များတယ်။ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာက လိုနေသေးတာပေါ့။ နောက်ပိုဆိုးတာက အရေးယူမှုအပိုင်း၊ ဒီရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို အရေးယူတယ်ဆိုတာ ထင်သာမြင်သာရှိရှိ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမှ ဒီဒေသမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာ နေနိုင်မှာပေါ့။ အခု အဲဒီဒေသမှာ ဖြစ်တဲ့သူတွေအပြင်ကို အခြားဒေသမှာ ရှိတဲ့သူတွေကလည်း စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့။ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုအရေးယူတာလဲ၊ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သလဲ၊ ဒါတွေကို နောက်ထပ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သလဲဆိုတာကို ထင်သာမြင်သာရှိရှိ လုပ်ရင် ညီအစ်ကိုများ စိတ်အေးချမ်းသာဖြစ်မယ်။”
သမ္မတက ရခိုင်အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ သဘောထား ပြောတဲ့အပေါ်မှာရော ဦးဝဏ္ဏရွှေတို့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြပေးပါ။
“ကျနော်တို့ ရခိုင်အစီရင်ခံစာအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ကော်မရှင်မှာ ပါဝင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အယူအဆပေါ့။ ကျနော်တို့ အယူအဆက အဲဒီအချက်တွေအပြင် နောက်လည်း လိုအပ်နေဦးမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒီပြဿနာက နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်အချက်တွေလည်း လိုဦးမှာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် သမ္မတ မိန့်ခွန်းထဲမှာပါတာ ကျနော်တို့ တခုသတိထားမိတာက အစီရင်ခံစာပါ အကြောင်းအရာအပြင် နောက်ထပ် လိုအပ်တာတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။”
မိုးရာသီလည်းရောက်တော့မယ်၊ ရခိုင်၊ မိတ္ထီလာ စတဲ့ နေရာတွေက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ နေထိုင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော လျာထားချက်အတိုင်းမီပါ့မလား။
“လျာထားချက်အတိုင်းမီမလား ဆိုတာ စိုးရိမ်နေတာပါ။ ကျနော်တို့တွေ့ရတာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အင်အားနည်းသူတွေပေါ့၊ သူတို့အတွက် ပိုစိုးရိမ်ပါတယ်။ အငြင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေကို ခဏထားလို့ သူတို့တွေရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာ။ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေဖန်တီးပေးဖို့က အရေးကြီးတာပါ။”
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာ ထိပ်တန်းစာရင်းပါနေတုန်းပဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးတော့ ဦးဝဏ္ဏရွှေဖြေတော့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာထက်စာရင် အသက်ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံစိတ်ချရမှုတောင် စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ ပြောတယ်လေ။ အဲတော့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှ အဲလို အခြေအနေ၊ ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်မလဲ။
“အဲအချိန် သတင်းထောက်မေးတုန်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင် အခြေအနေတွေလည်း တင်းမာ ရှုပ်ထွေးပြီး၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနေတဲ့ အနေအထား။ သူမေးတဲ့အချိန် ဒါကို လေ့လာနိုင်စွမ်းကလည်း မရှိသေးဘူး။ နောက် အရေးတကြီး ပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းအောင်ပဲ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အချိန်ပါ။ အခြေအနေကို ပူပန်နေရသူတွေဟာ နေ့ပေါင်းများစွာ ရပ်ကွက်တွေမှာ ကင်းတွေစောင့်ရတယ်။ ထစ်ကနဲလူစုလူဝေးဖြစ်လာရင် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတာတွေရှိတယ်။ တချို့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ညညဆို လန့်ပြီး ထအော်တာတွေ အထိတ်တလန့်ဖြစ်တာ ရှိတယ်။ ဒီအခြေအနေလွန်မြောက်ဖို့က နောက်ကွယ်ကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့၊ ကြိုးကိုင်နေသူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့၊ တိတိကျကျ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ပြည်သူအများ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး စိတ်အေးချမ်းမြေ့မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။”
နိုင်ငံတော်သမ္မတကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ နဲ့ နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းတုန်းက ရခိုင်ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နောက်ကွယ်ပါ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကို အရေးယူမယ်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်။ အခု လပေါင်းများစွာ ကြာပြီ။ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ပြောဆိုမှုတွေအပေ့ါ် ဘာများ ပြောစရာရှိလဲ။
“သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းပြောဆိုချက်တွေကတော့ ယေဘုယျကျပြီးတော့ အလယ်လတ်ကျတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပါ။ တကယ်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပဋိပက္ခက တခုပြီးတခု ရန်ကုန်မြို့နားထိ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ လူထုရဲ့ ထိတ်လန့်မှုကို ဒီမိန့်ခွန်းလောက်နဲ့တော့ မရဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့ အရေးပါတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို တခုပြီးတခု လုပ်သွားရင် လူထုက စိတ်အေးချမ်းသာမှု ရလာမယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။”
“နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်၊ အေးချမ်းမှုရှိအောင်၊ အစိုးရပိုင်းကလည်း ဆောင်ရွက်တာရှိသလို ပြည်သူတွေ ကြားမှာလည်း နှစ်ဖက်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ကြိုးစားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ တချို့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသလိုပဲ နိုင်ငံတော်အပိုင်းကလည်း ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူက ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စမဆို တိတိကျကျ ထုတ်ဖော်ပြီး အရေးယူရင် အာဃာတ မပါဘဲ ပြောတဲ့စကားအရ ပြည်သူတွေ စိတ်အေးချမ်းမှုရှိအောင်၊ ပဋိပက္ခတွေကို နောင်မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အချက်တချက်အနေနဲ့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော် ဘဲဥပုံရုံးခန်း၌ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
(ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်ပြီး New Myanmar ထူထောင် တည်ဆောက်မည်)
ယခုလို ကျွန်တော့်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လာရောက်ဖို့ ဖတ်ကြားတဲ့အတွက် ကျေးဇူး ဥပကာရ အထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီစီကို ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတာဖြစ်သလို အိမ်ဖြူတော်ကိုလည်း ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခွင့် ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရခင် (၁)နှစ်အလို ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး သံတမန်အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကလည်း အကြီးအကဲတွေ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ သမိုင်းကြောင်းအရ ရင်းနှီးပြီးသား နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ ရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲ တစ်ယောက်အနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း(၅၀)အတွင်းမှာ အခုလို အမေရိကန်ကို လာခွင့် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်း သမ္မတကြီး ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက် ခုလို လာရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနို်င်ငံမှာ ဒီကနေ့တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်း နိုင်ငံရေးစနစ်ချင်း တူညီမှု ရှိနေပြီ လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရသက်တမ်းဟာ (၂)နှစ် ရှိသွားပါပြီ။ (၂)နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အလေ့အကျင့်တွေ နည်းနေပါသေးတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိခဲ့သလို အခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ခုလို ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် သမ္မတကြီးရဲ့ မူဝါဒချမှတ်ပြောင်းလဲပေးမှုအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ (၂)နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ အတွက် အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ခုလို (နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး)စနစ်ကို ပြောင်းလဲတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲ မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း မြင့်မားနေတာတွေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးနေတာတွေ၊ လူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံ၊ ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်တွေ နည်းပါးနေတာတွေ၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူလတ်တန်းစားတွေ နည်းပါးနေတာတွေကြောင့် နိုင်ငံတော်ကို ပြောင်းလဲထူထောင်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲ မျိုးစုံကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့အခက်အခဲတွေကို စာနာထောက်ထားပြီးတော့ အမေရိကန်သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်း တစ်ချို့ဟာတွေ ကူညီဆောင် ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြတာဟာ စောစောက သမ္မတကြီး ပြောသွားသလိုပါပဲ ဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော် အရည်အသွေး မြင့်မားရေးကိစ္စတွေ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးမယ့်ကိစ္စတွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေ၊ ကဏ္ဍစုံ ဆွေးနွေးပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေ၊ အမြင်တွေ သိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆွေးနွေးမှုဟာ အင်မတန်မှ အကျိုးရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ အင်မတန်မှ အကျိုးရှိတဲ့ ခရီးစဉ် တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ရှေ့ကို ဆက်လက် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဆိုတာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ခွဲခြားလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခွန်အားနဲ့ နိုင်တာတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေသလို တစ်ဘက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ ပြည်ပက ခွန်အားတွေ ကျွန်တော်တို့ ရယူပြီးတော့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ပြောချင်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှေ့ကို ဆက်လက် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် သမ္မတကြီး မကြာခဏ ပြောဖူးသလိုပါဘဲ FORWARD ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ MOVE FORWARD ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ် New Myanmar ကို ထူထောင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရှေ့ကို ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
Read More : http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/20/remarks-president-obama-and-president-thein-sein-myanmar-after-bilateral
Articles News	Leaveacomment
In Arakan########Coincidental to the holy days of Eidul Azha, Rohingya Muslims of Burma became victim to yet another outbreak of violence over the past week. They were killed, their houses put on fire, forcing them to flee to the refugee camps set up by the United Nations on the border with Bangladesh. The Burmese government has put the death toll at 84 and said 129 were injured in nine stricken towns of the Rakhine state. But the New York-based Human Rights Watch says true death toll may be far higher.
The satellite images released by the Watch show the Muslim-majority Kyank Pyu town’s bustling harboura‘charred desolation’. Some 800 residential units including houseboats were burnt by the vandals, who arrived at some places in the guise of firemen, but to quench fires they ‘poured petrol instead of water’, an affected resident said – as the police looked the other way if it had not joined these firemen. A report also said that as the fear-stricken people were fleeing the harbour by boataBurmese naval craft struck and thus ‘those fled by boat have died on the sea’. Given the imposition of curfew curtailing accessibility, the government-conductedamedia trip to the blighted areas reveals only half truth. The whole truth about the grim tragic events over the week may never be known. But the ‘scale of exodus speaks of horrors on the ground’. Since Bangladesh refuses to take more Rohingya refugees the UN agency is now beset withaprofound problem of providing shelter to another 22,000 refugees in the packed to the brim camps.
That suchahuman tragedy keeps visiting the world conscience and nothing moves is all the more tragic. When Burma shed its pariah label by returning to democratic process it was hoped that Rohingyas would get some relief. Then it was Aung San Suu Kyi’s release from long incarceration that stirred the hopes of persecuted minority, but there was no relief. In fact, the opposite seems to have happened; her joining the political process lent the military regime its much-needed international legitimacy. The Nobel Peace Prize winner’s consistent silence over the lingering plight of Rohingyas tends to show her inadifferent colour in the Muslim world than her iconic image in the West. As leader of opposition in the Burmese parliament she may not have much clout, but she is ambiguous and equivocal whileaminority community is being wiped out; it’s disturbing if not intriguing. As to how complicit is the Burmese government the Human Rights Watch accuses the government of “both failing to intervene to stop sectarian violence and directly participating in abuses”. And the government would not let any body from outside to help the hapless, defenseless Rohingyas. According to BBC, it is President Thein Sein who “blocked” the Organisation of Islamic Conference (OIC) to open an office to help Muslims in distress in their visibly blighted and battered homeland.
To the West he may be the “Burmese Gorbachev” – for his moves to his country out of Chinese sphere of influence – but for the OIC the abiding interest should be protection of life and property of Muslims in that country. The present-day Rohingyas descend from the Arab-origin seafarers and traders who settled along Burma’s seaboard some seven hundred years ago. That after seven centuries of their uninterrupted citizenship, in 1984, the military junta excluded them from the list of 135 ethnic communities and thus deprived them of citizenship and basic rights. The United Nations describes the Rohingyas asapersecuted religious and linguistic minority – as against the Burmese government’s claim they are relatively recent migrants. We hope and expect the international community to stop this ethnic cleansing by defeating this racist mindset.
Untags	Leaveacomment
Tuesday, 30 October 2012 12:32
Maungdaw, Arakan State: Thousands of Rakhine mobs led by Rakhine ruling political party – Rakhine Nationalities Development Party-(RNDP) had restarted mass attacking, burning and destruction of Muslims villages and houses, in Minbya, Mrauk Oo, Kyaukpru, Pauktaw, Ratheydaung, Myebone, and Kyauktaw Townships since October 21, 2012, according to joint statement of 11 national and international Rohingya organizations.“This was the second time of genocide and persecutions of Muslims in Arakan in 2012 by the RNDP led Buddhist Rakhine people including Buddhist Monks with the direct help and strong involvement of the Burmese Government security forces of President Thein Sein from both central and Rakhine State Government.”
Thousands of Rakhine mobs surrounding the Kyauk Nimaw village of Manaung Township, Arakan State, for torching the houses and killing the Rohinya villagers even though the international pressure to the Burmese government, regarding the violence in Arakan State today morning at about 10:00 am, according to villagers from the locality.
“The Rakhine mobs tried early morning at about 5:00am to attack and set on fire the village – Kyauk Nimaw -, failed as the army stayed between two communities to protect the village. The Rakhines again gather at Thayoung Byine and Magyi Gone Rakhine village to attack the village at 10:00am where the army shot to the sky for not advancing and killed5Rakhines while the Rakhines forced them to fire on them.”
“More than 10,000 Rakhines gather near the Kyauk Nimaw village from other village which was supported by Taungup businessman U KyaukTaung for Rakhines travel cost to joint.”
“In Kyauk Nimaw, there are around 6,000 people – Male, female and children – are not able to protect their lives and no foods security for them if they are surrounded like this more.”
“Please, inform to the international community to save us and need your help to protect our village,” saidawoman from Kyauk Nimaw.
The Rakhine mob is marching to the Rohingya villages with four lines such as— children are in the front line, then the women are on the second line, on the third line are Rakhine men and the last line are Buddhist monks, according toareliable source.
But the security forces—-police and army are firing bullets into air to disperse the mob. However, we do not now the situation till writing the report.
Similarly, the Rakhine monks sent letters to Rohingya village- Sentaymaw village under Pauktaw Township- as threaten, to leave the village which they ( Rakhines) want to touch the village to show less killing to the international community who are protesting the killing of Rohingya community in Arakan, saidavillager from Pauktaw.
“Beginning from the month of October 21, 2012, at least fourteen villages were burnt down and thousands of people killed. Hundreds of Muslim girls and women were raped by the Burmese security forces and Rakhine extremists during attacking the Muslims in those townships. The Burmese Government officials and Security forces did nothing to prevent and stop these mass killings and attacks. President Thein Sein led Burmese Government had claimed that Arakan State is in normal situation but, in reality the situation has become more worsened day after day. These atrocities and mass killings were being committed under the open eyes of the Burmese security forces involving the Police, Lun Htein, and Army. Available reports confirmed that Buddhist Rakhine people led by RNDP President Dr. Aye Maung and Rakhine State Prime Minister Hla Maung Tin are trying to spread this violence across the whole Muslims residing areas of all Townships in Arakan,” the joint press release of 11 Rohingya Organizations stated on recent situation of Arakan state Muslims.
We, the organizations are- Odhikar, Bangladesh; Human Security Alliance, Thailand and Asian Muslim Action Network, Thailand- deeply concerned at the recent reports in the international media that scores of Rohingyas were killed in the fresh outbreak of violence in the northern Arakan state. We are also alarmed by the reports that hundreds of Rohinyga homes were burnt byavengeful Rakhine community, that in turn has led to the displacement of thousands of people. This is in addition to the 75,000 people who are still languishing in overcrowded camps set up by the Myanmar authorities with very little basic amenities. Observers have noted that the recent outbreak of violence against the Rohinygas is in line with the long-term plan of the Rakhine community to eliminate Rohingyas from all the townships where they areaminority. We, the three organizations notes that the local Burmese authorities in connivance with the central government is pursuingapolicy of apartheid under which tens of thousands of Rohinygas are housed in camps beyond the city limits under barbed wire fencing with armed guards placed at the entrances, according to press release “International support needed to protect Rohingyas from persecution.”
Lt-Gen Hla Min, the Commander-in-Chief (Army) Office; Union Minister for Border Affairs Lt-Gen Thein Htay, Arakan State Chief Minister U Hla Maung Tin, Commander of Western Command Brig- Gen Ko Ko Naing, resident representatives of WFP, UNOCHA and Mr Ashok Nigam, Resident Representative of UN agencies in Burma made an inspection tour of Myebon, Minbya, Mrauk-U, Ramree and Kyauk Phyu townships in Arakan State on October 28, in order to know the real situation on recent incidents, according to New Light of Myanmar. “The team saw large scale destruction of houses.”
An estimated 27,300 of the 28,000 newly displaced are Muslims, Nigam said, adding that the U.N. figure was based on statistics from local authorities.
The new numbers bring the total number of displaced in Rakhine state since June to at least 103,000.